Soo-saarista Nidaamka Soo-saarista Nidaamka - Soo-saareyaasha Nidaamka Qaadashada ee Tayada Sare, Alaab-qeybiyeyaasha
Mashiinka Buuxinta Auger & Powde
Mashiinka Buuxinta Powde wuxuu ku habboon yahay badeecada budada ah ee bilaashka ah, sida budada caanaha, bur, xawaash, kafee dhulka, nafaqada, kiimikada & budooyinka kale ee warshadaha.
Mashiinka Buuxinta GDC Volumetric Cup
Mashiinka Buuxinta Koobka Volumetric For Bariis, Sonkor, Cusbo, Qaxwo, Seeds, Nuts iwm granules yar yar.
Mashiinka Bastooladda otomaatiga ah Mashiinka Buuxinta Liquid
Nidaamka buuxinta waxaa wada mootada adeegga taas oo hubineysa saxnaanta buuxinta sare, sidoo kale way fududahay in si toos ah loogu dhigo mugga buuxinta shaashadda taabashada.
Filinka GDF Bistoolada
GDF Piston Filler ee dareeraha dareeraha ah, sida ketchup, majones, kareem, subag, macaanka, malab, shaambo iwm.
Alaabooyinka leh qaab aan caadi ahayn sida noocyada kala duwan ee baastada, cunnooyinka fudud, jajab iwm
Alaabada si fiican u-dhulka ku jirta oo ay ku yar tahay habaasku sida sonkorta, milixda, geedaha dhulka, budada lagu dhaqo, hominy, dhir udgoon, iwm
Sida ugufiican ugu habboon jeex, duudduuban ama alaabooyinka qaabka caadiga ah: sida sonkorta, cusbada, abuurka, bariiska, sisinta, glutamate, budada caanaha, kafee iyo budada xilliga, iwm.
Ku habboon qiyaasta waxyaabaha soosaarida sida digirta, bariiska, digirta, digirta kafee, jajab, baastada, baastada, macmacaanka, lowska, buskudka, miraha la qalajiyey, iwm.